यसरी गरिन्छ हर्टअट्याकको उपचार - Internet Khabar
Home Health यसरी गरिन्छ हर्टअट्याकको उपचार
यसरी गरिन्छ हर्टअट्याकको उपचार
नयाँ प्रविधिको विकाससँगै हृदयाघातको उपचारमा पनि धेरै परिवर्तन आएको छ । समयमा नै उपचार पाउन सकेमा धेरै मानिसहरुको मृत्युबाट जोगाउन सकिन्छ । उपचार पद्धतिमा आएको विकाससँगै अहिले बन्द भएको मुटु खोल्न विगतमा जस्तो घण्टौँ लामो शल्यक्रिया गर्नुपर्दैन ।
हृदयाघात भएका बिरामीलाई औषधि दिएर वा शल्यक्रिया मार्फत उपचार गरिन्छ । हृदयाघातको प्राथमिक उपचार भनेको नै हृदयाघातको शंका लाग्ने वित्तिकै वा हृदयाघात भएको थाहा पाएपछि एस्पिरिन नामक औषधि सेवन गर्नुपर्छ । ३०० एमजिको एस्पिरिन खानु नै सबैभन्दा राम्रो उपाय हो । हृदयाघातको जोखिम रहेका व्यक्तिका घरमा यो औषधि राख्नु सबैभन्दा राम्रो हुन्छ ।
हृदयाघात भएर आएका बिरामीको कोरोनरी एन्जियोग्राफी गरेर बिरामीको बन्द भएको मुटुको अवस्था पत्ता लगाइन्छ । कारोनरी एन्जियोग्राफी भनेको एक प्रकारको मुटुको एक्सरे हो । यसमा बिरामीको मुटुमा विशेषप्रकारको नली पठाइन्छ । त्यसमा एक विशेष प्रकारको रंगिन तरल पदार्थ हुन्छ । त्सले बिरामीको बन्द भएको मुटुको अवस्था प्रकृति र बन्दको मात्रा देखाउँछ । त्यसपछि चिकित्सकले एन्जिओप्लाष्टि गरेर स्टन्ट राख्ने काम गर्छन ।
एन्जिओप्लाष्टि भनेको बिना चिरफार हात थता तिघ्राको नसाको माध्यमद्धारा मुटुको नसा खुलाउन गर्ने शल्यत्रिया हो । एसमा एक विशेष प्रकारले तयार पारिएको बेलुन जस्तो स्टेन्ट बिरामीको बन्द नलीमा पुर्याएर फुलाइन्छ । स्टेन्टले बन्द भएको नलीलाई खुलाउने काम गर्छ । स्टेन्ट पनि दुई प्रकारका हुन्छन् । एउटा औषधि भएको र अर्को औषधि नभएको । औषधि भएको स्टेन्ट महंगो पर्छ । एक पटक स्टेन्ट हालेका बिरामीको फेरी नली बन्द हुने सम्भावना हुन्छ । तर औषधि हालिएको बिरामीमा ६ देखी एक वर्ष भित्र ५ देखी सात प्रतिशतमात्र पुन बन्द हुने सम्भावना हुन्छ । जबकी औषधि नहालेकोमा २३ प्रतिशतसम्म हुन्छ ।
अहिलेको समयमा एन्जिओप्लष्टि नै सबैभन्दा उत्तम उपचार हो । हृदयाघात भएका बिरामीलाई अस्पताल पु¥याएपछि तुरन्तै गरिने संकटकालीन उपचार हो । यो उपचार मुटु दुखेको ६ देखी १२ घण्टाको फरकमा र अस्प्तालको गेटबाट बिरामी भित्र छिरेको ९० मिनेट भित्र गरिन्छ । जति छिटो एन्जिओप्लाष्टी भयो बिरामीको मुटुका मांसापेशी मर्ने र पक्षघात हुने सम्भावना त्यती कम हुन्छ । यदि अस्पतालहरुमा यो सेवा उपलब्ध छैन भने जमेको रगत पातलो पार्ने औषधिको इन्जेक्सन दिने पद्धती पनि छ । हाम्रोमा अन्य अस्पतालबाट यस्तो औषधि दिएपछि एन्जिओप्लाष्टी गर्न आएका बिरामी धेरै भेटिन्छन् ।
हृदयाघातका बिरामीलाई बाइपास सर्जरी पनि गरिन्छ । बाइपास सर्जरी अर्को उपचार पद्धती हो । यो भनेको बिरामीको बन्द भएको नलीको ठाँउमा अर्को नली लगेर जोड्ने उपचार पद्धती हो । यस्मा शल्यक्रियाका लागि समय पनि लाग्छ । एन्जिओप्लाष्टिको प्रक्रियाद्धारा मुटुको धमनीमा रगत पठाउने सम्भावना नभएमा मुटुको बाइपास शल्यक्रिया गरिन्छ । यो चिरफारद्धार गरिने शल्यक्रिया हो । यस्तै बिरामीलाई औषधिका माध्यमबाट पनि हृदयाघातको उपचार गरिन्छ । तर औषधिको उपचार भनेको माइनर अवस्थाका लागि मात्र हुन्छ ।
-डा. शेखरराज भण्डारी, कन्सलटेन्ट कार्डियोलोजिष्ट, नर्भिक अस्पताल
Previous articleमहानायक राजेश हमाल थाइल्याण्डमा पत्नी मधुसँग मस्ती गर्दै (फोटो फिचर)
Next articleकिन पुरा भएन एक वर्षमा लोडसेडिङ हटाउने प्रधानमन्त्रीको वाचा? अझै दैनिक ६ घण्टा लोडसेडिङ
के खाए कोरोना सर्दैन् ?-भ्रम र यथार्थ !
कोरोना भाइरसको त्राससँगै नेपालमा डेगुं फैलिदै, ३६ बिरामी अस्पताल भर्ना
कोरोना सङ्क्रमित ७० हजार घर फर्के
कपडाका लगाउने आईरनको फेदमा लागेको कालो दागलाई हटाउने काईदाका टिप्सबारे जानकारी लिनुहोस